Ngaba uyazazi izixhobo zezilwanyana ukuba wazibona? Oku kuqokelelwe kwezithombe zepropati. Ukusetyenziswa kwezidakamizwa nayiphi na into eyenzelwe ukusebenzisa, ukwenza okanye ukufihla iziyobisi ezingekho mthethweni.
Iisringana zisetyenziselwa iziyobisi ezinokutsha. I-Arhente Yokunyanzelisa Amachiza e-US
Iisyringi zisetyenziselwa ukujoba iziyobisi. Iisirring ezilahlayo zisetyenziselwa izidakamizwa ezisemthethweni, ngoko kubona i-syringe ayikho, ngokwayo, ubungqina bokusetyenziswa kweziyobisi ezingekho mthethweni.
Iibhokhwe kunye namanzi
Olu lukhetho lwezilwanyana kunye neepayipi zamanzi zokusetyenziswa kwecuba kuphela 'ezithengiswa eManhattan. David Shankbone
Ezi ziyi-wrappers eziphoxayo ezazisetyenziselwa ukubamba i-PCP. I-Arhente Yokunyanzelisa Amachiza e-US
I-bong okanye ibhobho yamanzi kuyisistim esetyenziswa ukubhema icuba, isnabis, okanye ezinye izinto. Ukusebenzisa i-bong, isiseko sombhobho sigcwele ngamanzi ngelixa isitya sipakishwa kunye nezinto eziza kubhema. I-Arhente Yokunyanzelisa Amachiza e-US
Lo ngumzekelo wombhobho we-meth. I-Arhente Yokunyanzelisa Amachiza e-US
I-Marijuana Indlu yokuHlaliswa kweNdlu
I-Marijuana ingakhula ngaphakathi kwendawo isebenzisa izixhobo ze-hydroponic kunye nokukhanyisa kwe-fluorescent. I-Arhente Yokunyanzelisa Amachiza e-US
Le nto ifoto yokutshala i-marijuzana ngaphakathi kwimizi phantsi kwezibane ze-fluorescent. I-Arhente Yokunyanzelisa Amachiza e-US
Kwiminyaka yanamhlanje, ukutshala i-mariju okanye inokungabi mthethweni. Nangona kunjalo, kukho imida yemali enokuthi ikhule ukuze isebenzise ngokwakho, kwiindawo ezivumelayo.
I-hemostat isixhobo esifana nesibini yeempumlo zengxowuni zempumlo kunye ne-clamp yokuvala. Nangona yenzelwe unyango, isetyenziswa ngokuqhelekileyo njengesikrini se-roach. Splarka, i-Wikipedia Commons
Isiqeshana se-roach ngumnikazi onenjongo yokuthintela i-cigarette okanye idityanisi (ebizwa ngokuthi 'roach') ekutshiseni izandla okanye umlomo otshaya. Iqhosha le-roach lenza kube lula ngababhemayo ukuba badlule i-roach. Imizekelo yezinto ezisetyenzisiweyo njenge-roach iziqeshana ziquka i-hemostats, iziqeshana ze-alligator, i-clothespins, iinqununu zomdlalo, i-paperclips, kunye neziqhwa.
Olu hlobo lohlalutyo lokuhlalutya lubizwa ngokuba yi-Mettler balance. Le ibhalansi yedijithali esetyenziselwa ukulinganisa ubunzima kunye nokuchaneka kwe-0.1 mg. US DEA
Izilinganiso okanye izikali zi luncedo kwizorhwebo leziyobisi. Izilinganiso zokuhlalutya zibaluleke kakhulu kuba zingasetyenziselwa ukulinganisa amaninzi amancinci.
Nasi umzekelo we-bong okanye umbhobho wamanzi. US DEA
Izibilini zeglasi ziyaziwa njengeiphilisi. Ezi ziglasi zeglasi zinezixhobo zokurhoxisa kunye nezitshixo zensimbi. Wikipedia Commons
Izilwanyana zisetyenziselwa ukulawula iisampuli zamachiza kunye nezinye iinjongo ezininzi, kubandakanywa nokupakisha iziyobisi.
I-Erlenmeyer flask yintlobo yebhola yebhubhoratri ene-conical base kunye nentamo ye-cylindrical. I-flask ibizwa ngokuba ngumqambi wayo, isazi samachiza saseJamani uEmil Erlenmeyer, owenza i-Erlenmeyer yokuqala ibhola ngo-1861. Nuno Nogueira
Nangona isisitye somsebenzi we-laboratory esemthethweni, iifenki ze-Erlenmeyer zingasetyenziselwa ukwenza iziyobisi ezingekho mthethweni. Ezinye iindawo zifuna iimvume ukuze zithenge i-Erlenmeyer flasks kunye ne-glassware efanayo.
Isiqhumane saseFlorence okanye i-flask ebilisayo yi-borosilicate glass bottom container eneendonga ezinamandla, ezinokukwazi ukutshintsha ukushisa kweenguqu. Nick Koudis / Getty Izithombe
I-flask yaseFlorence enye uhlobo lwe-chemistry glassware eluncedo kwizorhwebo ezingekho mthethweni. Ezinye iindawo zilawula ukuthenga nokugcina le ngxube yeglasiware.
Ukwahlukana Phakathi kweeNgesi nesiBrithani isiNgesi
Imbali ye-Global Positioning System-GPS
Indlela Yokusinda - 1 Korinte 10:13
Ifom yeProgram yokuPhucula
USAFA GPA, SAT kunye ne-ACT Data